Be ny marary dia ho lasa mamy be koa ilay miaina. Ho tia hiasa be ny olona satria mahatsiaro fa mandalo ny fiainana, hoy ny tenany. Ho an’ny Mpiandry iray eo anivon’ny finoana loteranina kosa dia manana ny fiheviny aminy Andriamanitra ary ny mitondra am-bavaka ny firenena no azo atao. Ho an’ny mpandinika sasany kosa dia misy antony tokony hampieritreritra ny tranga tahaka izao. Saika isa-kerinandro dia misy loza foana. Tao ny tototry ny tany. Tao ny tondraky ny rano. Hatreny ana habakabaka koa aza tao ho ao nisy loza nanamarika ny fiainam-pirenena.” Na ny tany na ny rano na ny rivotra ve izany dia samy tezitra amintsika avokoa ?”, hoy ireo mpandinika zavaboary. Anjaran’ny tsirairay tokoa ny mieritreritra na hadisoantsika irery na adisoan’ny mpitondra irery.